Atọ Atọ 4 Otu Ifufe XNUMX Kụrụ Oke Osimiri Pasifik n'otu oge | Netwọk Mgbasa Ozi
Sergio Gallego | | Ajọ Ifufe
Ọ bụ oge mbụ ebe ọ bụ na e nwere ndekọ ihu igwe na ajọ ifufe atọ akpọ dị ka Atiya 4 egwuregwu na na-guzobere n'otu ebe ahụ.
Oke Osimiri Pasifik ahụwo otu ụdị ihe ịtụnanya a si malite nke na-emetụbeghị n'ebe ọ bụla na mbara ala na nke oke ifufe atọ dabara buru ibu.
N'ihi ihe oyiyi ọ na-enye Satellite NASA, ị pụrụ ịhụ na nsogbu nke atọ Atọ 4 hurricanes na Oke Osimiri Pasifik. Akpọwo ajọ ifufe aha Kilo, Ignacio na Jimena ha wee kwụ n’ahịrị n’etiti Pacific. Dị ka onyonyo a si dị, Ajọ Ifufe Kilo dị n'akụkụ ọwụwa anyanwụ nke oke osimiri ma na-ebute ikuku nke nwere ike iru ihe 200 km / h. Ajọ Ifufe Ignacio emi odude ke ufọt, kpọmkwem banyere Kilomita 600 site na Hawaii. N’okwu a, ikuku ifufe na-efe kilomita 220 kwa elekere.
Ajọ Ifufe Jimena ọ dị n'akụkụ ọdịda anyanwụ nke Pacific na ifufe ya na-erukwa 200 km / h. Dị ka ọtụtụ amụma si dị, Jimena ga-abịakwute Hawaii n'izu a, na-akpata ike mmiri ozuzo na oké ifufe dị egwu na mpaghara ahụ dum.
Ihe omume a na-enwetụbeghị ụdị ya na akụkọ ihe mere eme na-eme mgbe na Oke Osimiri Atlantic Ihe omuma ozo n’eme kwa nke na adota uche ndi okachamara. Ajọ Ifufe Fred ga-abụ ajọ ifufe mbụ gafere nke Agwaetiti Cape Verde, bụ mpaghara Africa ebe oke mmiri ozuzo na-etolite ma na-erute ike ajọ ifufe mgbe ọ bụla gaa agwaetiti Caribbean.
Usoro a nke Ihe gbasara ihu igwe dị ka ọtụtụ ndị ọkachamara si kwuo, ha bụ nsonazụ doro anya nke ihe ahụ nke El Niño dere nke na-emetụta South America, n'ihi oke ọkụ nke mmiri nke mpaghara ndị ahụ na-ata.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Ajọ Ifufe » Ifufe Atọ Atọ Atọ kụrụ Oke Osimiri Pasifik n'otu oge
Mmegharị nke osisi na mgbanwe ihu igwe